Tari-dalana Toriteny Alahady 26 jona 2016 (Alahady faha-5 manaraka ny Alahadin’ny Trinité) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Sehatra ivondronana, ifampizarana, sy ifampitaizan'ny Zanaky ny FLM maneran-tany
Karohy eo izay mety hahasoa anao
Tari-dalana Toriteny Alahady 26 jona 2016 (Alahady faha-5 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy. Indro ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny FLM amin’ny Alahady faha 26 Jona ho avy izao. Mirary soa daholo tompoko.
Miverimberina ato amin’ity perikopa ity ny anarana hoe “sambokely” (Gr. πλοῖον, eng. boat). Andeha ampiasaintsika mba hanazavana sy hampitana ny hevitr’ity texte ity izany.
1)Ny sambokely dia symbolin’ny Fiangonana Kristiana. Ny ranomasina izay misy azy sy manodidina azy dia symbolin’izao tontolo izao: izany hoe, ny Fiangonana Kristiana mbola eto amin’izao tontolo izao no sary asehon’izany. Ny maha izy azy izany Fiangonana izany anefa dia izy manana an’i Jesosy sy ny teniny ary ny fampianarany monina eo anivony. Ny asan’izany Fiangonana izany eto amin’izao tontolo izao dia ny manambara an’i Jesosy Kristy sy ny asany, indrindra ny hazofijaliana.
2) Texte mitantara ny niantsoan’i Jesosy an’i Petera ity. Mpanarato trondro Petera ary amin’izany talentany izany no nantsoin’i Jesosy hanarato olona koa. Izany hoe, antsoin’i Jesosy ao amin’ny talentany mba hanatanteraka ny asa ministerialiny ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny olona tsirairay. Avy ao anatin’ny sambokely no nandefasan-dry Petera ny harato tany anaty ranomasina mba hahazoana ny hazan-drano, izany hoe, avy ao anatin’ny Fiangonana no andefasany ny tenin’i Jesosy izay voalaza teo ambony fa monina ao mba handresena lahatra izao tontolo izao ho isan’ny vahoaky ny Fanjakan’Andriamanitra. Na koa, izay ao anatin’ny Fiangonana, na izay mahazo laka ao, dia ny tenin’Andriamanitra, no ampiasainy amin’ny fanaratoana olona ho amin’ny Fanjakan’Andriamanitra izany.
3) Teo amin’ny fanatrehan’i Jesosy sy tamin’ny alalan’ny fankatoavana ny teniny no nahombiazan’ny asan-dry Petera. Izay antsoin’Andriamanitra hanao ny asa ministerialy ho fanitarana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra dia tsy maintsy manao izany amin’ny fanatrehan’Andriamanitra (presence de Dieu/Jesus) ary tsy maintsy mankato ny teniny ihany koa. Misy challenge (zavatra sarotra tsy maintsy hatrehina) amin’ny fanavaona izany kanefa ny fanomezan-toerana an’i Jesosy mba hanatrika sy homba mandrakariva amin’izany no hahombiazana. Izy no tena mampamokatra ny asa.
4) Ny mpanompo izay mampiasa ny talentany ho amin’ny famoriana olona ho an’Andriamanitra eo ambany fomban’i Jesosy Kristy no ho lazainy hoe mahatoky sy mahefa be eo amin’ny asany ka antsoiny hiditra amin’ny fifaliany mandrakizay. Ho antsika rehetra izay efa nantsoiny koa ary, raiso ho paik’ady hanaovanao ny asan’ny Tompo koa izany dia ho isan’izay ho tsenainy amin’izany teny mamy izany ianao amin’ny andro farany.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra izay efa Azy hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen!
Nosoratan’i Pastora Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra ao amin’ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)
Henoy eto ny Radiontsika
Hoy ny Sal 143:10 " Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa Hianao no Andriamanitro, ary aokany Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 08 Janoary 2017 (Alahady Voalohany manaraka ny EPIFANIA)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika nahavita soa ny fankalazana ny Taombaovao sy ny Epifania. Indro atolotra anareo indray ny ...Hanohy hamaky
Hafatra Krismasy araka ny Lioka 2.11: Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanan'i Davida dia Kristy Tompo
Krismasy moa no ankalazaintsika. Andeha Ity Lioka 2:11 ity no ho raisintsika ho hafatra ho antsika amin'izany. "Fa Mpamonjy no teraka ho ...Hanohy hamaky
Fitiavana marina I
FITIAVANA MARINA Fototra ara-tsoratra Masina iorenan'ny Fanambadiana (Fintina) Andriamanitra no nanorina ny fanambadiana: rehefa vitan’Atra ny famoronana izao tontolo izao sy izay rehetra teo ...Hanohy hamaky
Miarahaba antsika nahatratra ADVENTO 2016
"Misaora an'i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina" (Sal 103:1) Izany teny izany no iarahabana antsika rehetra ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny: miato kely ... hiverina tsy ho ela
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Noho ny fianarana dia mba hiato kely aloha ny fanolorana ny tari-dalana momba ny texte ...Hanohy hamaky
Ireo Trano Fiangonantsika